Maxay GDPR ugu Fiican Tahay Xayeysiinta Dijital ah | Martech Zone
Sharci-dejin ballaaran oo loo yaqaan ' Nidaamka Badbaadinta Macluumaadka Guud, ama GDPR, wuxuu dhaqan galay Meey 25th. Waqtiga kama dambaysta ah wuxuu lahaa ciyaartoy badan oo xayeysiinta dhijitaalka ah oo xoqanaya iyo inbadan oo ka walwalsan. GDPR waxay saxeysaa qaddar waxayna keeni doontaa isbeddel, laakiin waa isbeddel suuqgeyaasha dijitaalka ah waa inay soo dhoweeyaan, ma ahan cabsi. Waa tan sababta:
Dhammaadka Pixel / Kuleylka ku saleysan kuleylka wuxuu ku fiican yahay warshadaha
Xaqiiqdu waxay tahay in tani ay ahayd mid soo daahday. Shirkaduhu cagaha ayey jiidayeen, mana aha wax lala yaabo in Midowga Yurub uu hoggaamiyo dacwadan wejigan. Tani waa bilowga dhamaadka tusaalaha pixel / cookie-based. Xilligii xogta la xaday iyo xoqitaanka xogta waa dhammaatay. GDPR waxay u soo jeedin doontaa xayeysiinta xogta ku saleysan inay ka doorbido oo ogolaansho ku saleysnaato, waxayna bixin doontaa xeelado baahsan sida dib-u-habeyn iyo dib-u-qiimeyn yar oo xawli iyo xamaasad leh. Isbeddeladani waxay horseedi doonaan xilliga soo socda ee xayeysiinta dhijitaalka ah: suuq-geynta dadka ku saleysan, ama midda isticmaasha xogta qeybta koowaad halkii laga heli lahaa xogta dhinac saddexaad / xayeysiinta.
Ku Dhaqanka Wershadaha Xun Ayaa Liqi Doona
Shirkadaha sida weyn ugu tiirsan qaababka iyo bartilmaameedyada bartilmaameedka macquulnimada waa la saameyn doonaa inta badan. Taas macnaheedu maaha in dhaqamadaasi gebi ahaanba baaba'ayaan, gaar ahaan maadaama ay sharci ka yihiin dalal badan oo ka baxsan Midowga Yurub, laakiin muuqaalka dhijitaalka ah wuxuu u xuubsiiban doonaa xogta kooxda koowaad iyo xayeysiinta macnaha guud leh. Waxaad bilaabi doontaa inaad aragto dalal kale oo fulinaya nidaamyo isku mid ah. Xitaa shirkadaha ka shaqeeya waddamada aan farsamo ahaan hoos imaanin GDPR waxay fahmi doonaan xaqiiqda suuqa adduunka waxayna la falgeli doonaan jihada ay dabayshu u socoto.
Xog Dheeraad ah ayaa Nadiifisa
Tani waxay kufiican tahay xayeysiinta iyo suuq geynta guud ahaan. GDPR waxay durba ku dhalisay shirkadaha qaarkood ee Boqortooyada Midowday inay fuliyaan nadiifinta xogta, tusaale ahaan, inay hoos u dhigaan liisaska emaylkooda illaa saddex meelood laba meelood. Qaar ka mid ah shirkadahaani waxay arkayaan heerar sare oo furan oo gujinaya maxaa yeelay xogta ay hadda haystaan ​​ayaa ka tayo wanaagsan. Tani waa sheeko xariif ah, hubaal, laakiin waa macquul in la qorsheeyo in sida xogta loo soo ururiyaa ay ka sarreeyaan guddiga iyo haddii macaamiisha ay raalli ka yihiin oo ay ogaal u doortaan, waxaad arki doontaa heerar sare oo hawlgal ah.
Ott waxay u taagan tahay dusha sare, erayga loo adeegsado gudbinta filimka iyo waxyaabaha TV-ga ku jira ee internetka, iyada oo aan loo baahnayn in isticmaaleyaashu ay ku biiraan fiilo dhaqameed ama dayax-gacmeed lacag-TV ah.
Dabeecadeeda darteed, OTT ayaa si quruxsan uga go'antahay saameynta GDPR. Haddii aan lagaa dooran, laguma bartilmaameedsanayo, tusaale ahaan, haddii lagugu bartilmaameedsado Youtube. Guud ahaan, in kastoo, OTT ay sifiican ugu habboon tahay muuqaalkan dhijitaalka ah ee isbeddelaya.
Waxay u fiicantahay Daabacayaasha
Way adkaan kartaa muddada-gaaban, laakiin way u fiicnaan doontaa daabacadaha muddada-dheer, oo aan ka duwanayn waxa aan bilaabi doonno inaan ku aragno shirkadaha maareynaya keydkooda macluumaadka email. Nadiifinta xogtan qasabka ah ayaa laga yaabaa inay markii hore adkaato, sidaan kor ku soo sheegnay, laakiin shirkadaha u hoggaansamaya GDPR waxay sidoo kale arkayaan macaamiil badan oo ku hawlan.
Sidoo kale, daabacayaashu waxay arki doonaan macaamiil badan oo ku mashquulsan waxyaabaha ay wataan nidaamyo adag oo ka doorbid ah. Xaqiiqdu waxay tahay in daabiciyeyaashu ay ahaayeen kuwo aan ku qanacsanayn saxeexyada iyo xulashada muddo dheer. Dabeecadda ikhtiyaariga ah ee tilmaamaha GDPR waxay kufiican tahay daabacayaasha, maxaa yeelay waxay ubaahanyihiin xogtooda kooxda-koowaad inay saameyn ku yeeshaan.
Iskudarka / Kaqeybgalka
GDPR waxay ku qasbeysaa wershadaha inay si adag uga fikiraan sida ay u wajaheyso qeexitaanka, taas oo in dhaweydba laga soo shaacbaxay in muddo ah. Way ku adkaan doontaa in la buuxiyo macaamiisha, waxayna ku qasbi doontaa warshadaha inay keenaan waxyaabo shakhsi ahaaneed oo macaamiisha ay rabaan. Tilmaamaha cusub ayaa dalbaya kaqeybgalka macaamiisha. Taasi way adkaan kartaa in la gaaro, laakiin natiijooyinka waxay noqon doonaan kuwo tayo sare leh.
Tags: xayeesiintaciqaabidcookiecookiesmuraayadaha indhahaadvertising digitalGDPROctoberdusha sarepixelraadraacaraadinta pixel
Larry Harris waa maamulaha shirkadda 'Sightly', oo ah barmaamij xayeysiin fiidiyoow ah oo adeegsada bartilmaameed u ah dadka si ay ula midoobaan daawadayaasha xayeysiinta fiidiyowga ee ugu habboon.
Ansaxnimo: Qalabka Aaminaadda Macluumaadka ee Maamulkaaga CRM